सुरेन्द्र श्रेष्ठको भद्र असन्तुष्टी: के हुँदैछ एनआरएनमा ? - Everest Dainik - News from Nepal
सुरेन्द्र श्रेष्ठको भद्र असन्तुष्टी: के हुँदैछ एनआरएनमा ?
लण्डन । करिब दुई महिना अघि हामी नयाँ नेतृत्वको अन्तिम तयारीमा थियौँ । संसारभरिका गैरआवसीय नेपालीहरुको नेतृत्व चयन गर्न प्रतिनिधिहरु काठमाण्डौमा जम्मा भएका थियौँ । हायात होटलको ती केही दिनहरु यस्तो लाग्थ्यो हामी अर्कै दुनियाँमा छौँ । वास्तविक दुनियाँ बिर्सँदै फेरि फर्कन नपर्ने हो कि भन्ने भ्रममा थियौँ । चुनावमा उममेद्वार बन्नेहरु भन्दा हामी जिताउनेहरु अझ भनौँ हराउनेहरुको चहलपहल धेरै थियो । आफू हार्ने हेक्का भने त्यति धेरै थिएन । जे होस् निर्वाचन आखिर हारजीत मै टुङ्गिनुपर्ने थियो । त्यो बाहेक अरु उपाय निर्वाचन अगाडि मात्र सम्भव हुन सक्थ्यो तर भएन । अपेक्षाकृत ढंगबाट परिणाम आएपनि प्रतिद्वन्दीलाई जति कमजोर आँकलन गरिएको थियो त्यो भने सही ठहर भएन । जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि निर्वाचन यस्तो कठोर बाटो हो जे भएपनि नतिजामा पुग्नै पर्छ । कसले कसरि के गर्यो भन्दा पनि अरुले भन्दा आफूले बढी गर्न सकिएन भनेर चित्त बुझाउने बाहेक अरु उपाय हुनै सक्दैन । नतिजापछिका क्रियाकलापहरु त्यतैतिर गएको देखियो, जुन सकारात्मक छ ।
संस्थाको प्रमुख संरक्षक को बन्ने ? भन्नेबारे किटानी व्यवस्था नभए पनि हालसम्म पूर्व अध्यक्षहरु र एकपटक अध्यक्ष बन्न चाहेको, बन्नै पर्ने तर हुन नसकेका संस्थापक सदस्य राम थापा हुनुभएको देखिन्छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको तीन कार्यकाल सकिएपछि देवमान हिराचन अध्यक्ष हुनुहुँदा पूर्व अध्यक्ष स्वतः प्रमुख संरक्षक हुनुभयो । देब मान हिराचनले दोस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका कारण उहाँलाई चित्त बुझाउन प्रमुख संरक्षक बनाइयो । त्यसबेला राम थापा अध्यक्ष बन्ने भन्ने कुरा त भयो तर जीवा लामिछाने अध्यक्ष बनेर देवमान हिराचनलाई प्रमुख संरक्षक बनाइयो । जीवा लामिछाने पछि त राम थापा अध्यक्ष बन्न पाइन्छ भन्ने थियो । तर धेरै जना अध्यक्ष बन्ने तयारी भएपछि अन्त्यमा राम थापालाई प्रमुख संरक्षक, हितमान गुरुङलाइ र रामेश्वर शाहलाई संरक्षक बनाउँदा पनि शेष घलेले तेन्जी शेर्पा सग चुनावमा उत्रनु पर्यो । शेष घलेको दोस्रो कार्यकालमा भने जीवा लामिछानेलाई मुख्य संरक्षक बनाइयो । भवन भट्टको पालामा आउँदा फेरि संस्थापक अध्यक्षलाई प्रमुख संरक्षक बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
अहिले आएर फेरि पूर्व अध्यक्षमध्ये शेष घले नै प्रमुख संरक्षक बनाइयो । यसरि हेर्दा यो प्रमुख संरक्षकको पद आफ्नो शक्ति प्रमाणिकरण र चित्त बुझाउनको लागि प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ ।
पहिले पनि बढी विवाद भएको व्यक्ति फेरि पनि दोहोरिनुलाई भने मैले सहज रुपमा लिएको छुइन । व्यक्तिगत रुपमा कसैप्रतिको विमति भन्दा गरिएका निर्णयहरुको कमसेकम केही आधारहरु हुनुपर्छ भन्ने हो । चुनावमा जित्न नसकेका कसैलाई पनि कुनै पदमा लान हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन । बरु त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई उपयुक्त जिम्मेदारी दियर अभियानमा नै सक्रिय बनाउन सक्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
कुनै पनि पदको गरिमा त्यो पदले मात्र कायम गर्न सक्दैन त्यस्तो पदमा बस्नेको पृष्ठभूमि र कार्य क्षमताले मुख्य भूमिका निर्बाह गर्दछ ।
हुन् त यो सबै तर्क हरु मैले आफु सल्लाहाकार बन्न नपायकोले गर्यो भन्ने देखिन सक्छ । त्यसो त यो १४ वर्षे अभियानमा एक कार्यकाल बेलायतको राष्ट्रिय उप संयोजक, एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, एक कार्यकाल केन्द्रीय सल्लाहकार बाहेक, अन्य जिम्मेवारी लिएको छैन । एक पटक केन्द्रिय सचिवको निर्बाचनमा भाग लियर हारियो । तर सकेजति राष्ट्रिय, क्षेत्रीय कार्यक्रमहरुमा संलग्न हुने आफूलाई लागेको धारणाहरु सार्वजनिक गर्ने गर्दै आएको छु । संस्थाले उठायका बिषयहरु कानुनी रुपमा स्थापित गर्ने कोशिश गर्दै आयको छु । पदभन्दा काम ठूलो हो भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु ।
धार्मिक, राजनीतिक र जातिय संस्थाका कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरु यस संस्थाको पनि जिम्मेवार पदमा चुनाव लड्न नपाउने भनेर विधानमै व्यवस्था गरिएको विषय सधैँ विवादित रह्यो ।
चुनाव लड्न नपाउने भनेपछि मनोनित हुने पदहरु पनि हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर यसबारेमा मेरो धारणा त अन्य कुनै सक्रिय संस्थाको नेतृत्व नै गर्ने भएपछि किन यो संस्थामा पनि आउन पर्छ र ?
समाजमा कुनै माध्यमबाट संलग्न वा स्थापित भैसकेपछि भएभरको संस्थामा किन जिम्मेदारी लिदै हिँड्न आवश्यक हुन्छ र ? समाजमा आफूले खेलेको भूमिका अनुसार एउटै संस्थाको माध्यमबाट पनि सक्रिय रहन सकिन्छ नि ! बरु आफू रहेको वा आफूले नेतृत्व गरेको संस्थामै बढी सक्रिय भएर त्यसैलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।
विशेष गरी राजनीतिक आस्थाको आधारमा समाजमा स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरु सबैजना सबैतिर नेतृत्व लिने होडमा लाग्नुभन्दा आफ्नै भातृ संगठनका लागि के कसरी सबै संस्थाको सहयोग समर्थन जुटाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ । यो विषयमा अरुले प्रश्न उठाउनुभन्दा पहिले त्यस प्रकारको प्रश्न उठ्न नै नदिन सक्नु पर्दछ । कुनै पार्टीको भात्री संगठनको नेतृत्व पनि गर्ने अनि गैरआवासीय नेपाली संघको पनि विभिन्न पदमा सधै भरी टाँसीरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताबाट मुक्त रहन सक्नुपर्दछ । म सन् २०१३ मा केन्द्रीय सदस्य हुँदा बेलायत पार्टीको अधक्ष्यबाट राजीनामा दियर उपाध्यक्षलाइ कार्यबाहक अधक्ष्य बनायका थियौ । त्यति बेला पार्टी र मोर्चा दुइटा हुन्थ्यो ।
पार्टी भूमिगत नै भएकोले राजीनामा दिन पर्दैन भनिए पनि मलाई त आफू पार्टी अधक्ष्य भएको थाहा छ नि भन्दै राजीनामा दिएको थिएं । पछि सल्लाहाकार मनोनित हुदा भने राजनीतिक जिम्मेदारी दिएको हुदा महाधिबेशन आयोजक समिति बाट राजिनामा दिन आबश्यक ठानिन साथै पार्टी एकताको थालनी भै सकेकोले यो बिषय ओझेलमा पर्यो ।
ट्याग्स: सुरेन्द्र श्रेष्ठ